पबित्राको पछिल्लो अ’वस्थाबारे जानकारी दिदै भाग्य न्याैपाने अस्पताल पुगेर ल्याए यस्तो भिडियो – पुरा पढ्नुहोस्……
पबित्राको पछिल्लो अ’वस्थाबारे जानकारी दिदै भाग्य न्याैपाने अस्पताल पुगेर ल्याए यस्तो भिडियो
काठमाण्डौं- पछिल्लो समय नेपालमा एʼसि ʼड आʼक्र, मणका घटʼना दोहोरिन थालेका छन्। अहिलेसम्म भएका ए ,सिड आ,क्णरका घटʼनालाई हेर्ने हो भने ए,सिʼड आʼक्र,मणको सिकार किशोरी, युवती तथा महिला पर्ने गरेका छन्। ए ,सिड आ,क्णरमʼ को सिʼकार हुनेहरुको जिन्दगी नै कʼष्टकर हुने गरेको छ। पी,डित पक्षहरुले अपरा,धीलाई कʼडाभन्दा कडा कारʼबाहीको कानुन बनाउन माग गर्दै आएका छन्।
ओखलढुङ्गाकी २२ बर्षिय युवती पवित्रा कार्की माथी एक हप्ता अगाडि मात्रै बिहीबार साँझ काठमाडौँको सितापाइलामा एʼ सिड आ ʼक्रʼमण भएको थियो। साँझको समयमा दही किन्न निस्किएकी पबित्रालाई ए,सिʼड प्रʼहार भएको हो। उनी पढ्नको लागी काठमाडौंमा आफन्तसँग बस्दै आएकी थिइन्। उहाँको कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
घʼटनामा संलग्न रहेको अभि’ योगमा एʼसिʼड हाʼन्न लगाउने मोहम्मद आलम र युवतीलाई एसिʼड प्रहाʼर गर्ने मुन्ना मोहम्मद प,क्राउ परेका छन्। उनीहरुमाथि प्रहरीले कानुनी कारʼबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसरी एक पछि अर्को गर्दै एʼसिड प्रʼहारको घʼट्ना घटिरहेको छ। पबित्रा कार्की त यस घट,नाको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
एसिʼड प्रʼहार बाट नै घाईʼते भएकी अर्की पि ʼडित मुस्कान खातुन का’नुन फित’लो भएकै कारण महिलाहरुलाई स्वतन्त्र भएर बाँʼच्ने अधिकार नभएको बताउँछिन्। एसिʼड प्रहाʼरका घʼटना बारम्बार दोहोरिदा महिलाहरु समाजमा सुरʼक्षित हुन नसकेको उनको गुʼनासो छ। उनी भन्छिन्, चोʼट हेरेर हैन सोच हेरेर कडा भन्दा कडा कार्वाʼही हुनुपर्छ।
पीʼडित पबित्रा लाई भेट्न भाग्य न्याैपाने हस्पिटलमा गएका छन्। तर त्यहाँ हस्पिटल भित्र भिडियो खिच्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले भाग्यले पीʼडिʼतको परिवारलाई भेटेर लण्डनबाट समाजसेवी इशा गुरुङ दिदिले पबित्राको सहयोगको लागी पठाउनु भएको रु. २०००० (बीस हजार) रुपैयाँ उहाँको परिवारलाई हस्ताʼन्तरण गर्नु भएको छ।
त्यस्तैगरी करिब एक बर्ष अगाडी एसिʼड आक्रʼमʼणमा नै पर्नु भएको मुस्कान बहिनीलाई भाग्यले आफ्नो ब्यक्तिगत तर्फबाट रु. १००००(दस हजार) रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको छ।
नेपालको कानुनमा मुख बिʼग्रिने गरी एʼसिʼड हाʼलेमा आठ वर्षसम्म कैद, हात र शरीरमा परेमा पाँच वर्षसम्म कैʼद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर पी’ डित परिवारका सदस्यहरुले भने अपʼराʼधी लाई हʼदैसʼम्मको कारʼबाही हुनेपर्छ भन्ने माग राखेका छन्।
Prevआज एकै दिन कोरानाबाट ४ जनाको ज्या,न गयो, योसँगै मृ;त्यु हुनेको संख्या ५६ पुग्यो
Nextकोरोना संक्र’मित बढ्दै गएपछि आज राति १२ बजेबाट बिराटनगरमा १४ दिन पुनः लक’डाउन
जापानले समेत माग्यो नेपाली कामदार ! दक्षिण कोरिया जस्तै गरि कामदार लैजाने तयारी-हेर्नुहोस (भिडियो सहितको यो रिपोर्ट)
एक्कसी डुंगामा चट्याङ पर्यो, साथी सुप्रिम खुत्रुक्कै फेवा तालमा खस्यो ( भिडियो सहित )
रौतहटमा जासुसी गर्न आएको । चिल भेटियो जसको सरिरमा रेडियो ट्रान्समिटर यन्त्र जडान भएको छ पुरा हेर्नुहोस